इलेक्ट्रिक कार म्यानुअल - सबै तपाईंले इलेक्ट्रिक कारहरूको भविष्यको बारेमा जान्नु आवश्यक छ - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र बी2बी मार्केटप्लेस समाचार
इलेक्ट्रिक कार म्यानुअल - तपाईंलाई इलेक्ट्रिक कारहरूको भविष्यको बारेमा जान्नु आवश्यक छ
फेब्रुअरी 18, 2021 फेब्रुअरी 17, 2021 Dmytro Spilka ब्लग, व्यापार, विशेष समाचार, प्रविधि
इलेक्ट्रिक कारहरूले अटो उद्योगमा परिवर्तनको प्रेरणा पाए।
युके २० 2030० सम्ममा जीवाश्म ईन्धन कारहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने योजनामा ​​छ।
यद्यपि नयाँ टेक्नोलोजीहरू हामीलाई जीवनका नयाँ तरिकाहरू प्रदान गरेर चाखलाग्दो र रमाईलो हुन सक्दछ, ती लागतमा आउन सक्छन्।
बितेका केही वर्षहरुमा, मौसम परिवर्तन विरुद्ध लडाई छिटो बढेको छ। यो नयाँ पहलले विभिन्न उत्पादनहरूको विभिन्न प्रकारको जन्मलाई मद्दत पुर्‍यायो जसले हामीलाई हरियो तरिकाहरूमा दैनिक जीवनमा जान मद्दत गर्दछ।
मोटरिंग ईन्डस्ट्री सब भन्दा जाँच्ने माध्यमबाट आएको छ, जसको मतलब यसले मार्गमा चुनौतीहरूको आफ्नो निष्पक्ष साझेदारीको सामना गरेको छ। यी चुनौतीहरू Birthed इलेक्ट्रिक कारहरु लाई मद्दत गरेको छ। इलेक्ट्रिक कारहरूले उद्योगमा परिवर्तन ल्याएका छन र नयाँ टेक्नोलोजीहरू र स्लीकर कारहरूको लागि मार्ग प्रशस्त गर्दै छन्, जसले वातावरणलाई बाधा पुर्याउँदैन। थुप्रैले इलेक्ट्रिक सवारीहरू किनेका लागि छनोट गरेका छन्, तलको ग्राफबाट स्पष्ट छ।
बेलायत सरकारले २० change० सम्ममा पेट्रोल र डिजेल कारको बिक्री प्रतिबन्ध लगाउने योजनालाई पुष्टि गर्दछ जलवायु परिवर्तनलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्नको लागि, यहाँ इलेक्ट्रिक सवारीका बारे म्यान्युअल जान्नु आवश्यक छ जुन तपाईंलाई आफ्नो खरीद गर्दा राम्रो र सूचित निर्णय लिन मद्दत गर्दछ।
इलेक्ट्रिक कारहरूले कसरी काम गर्छन्?
इलेक्ट्रिक कारहरू सामान्यतया एक इलेक्ट्रिक चार्ज ब्याट्री द्वारा संचालित हुन्छन्, नियमित दहन इञ्जिनहरू जस्तो छैन जुन पेट्रोल र डीजल जस्ता ईन्धनहरू सञ्चालन गर्दछ। ब्याट्री प्याकले मोटरलाई शक्ति दिन्छ जुन कारको पा .्ग्रा घुमाउँदछ, यसलाई सार्नको लागि। धेरै जसो अवस्थाहरूमा, भित्ता सकेटहरूले ब्याट्रीहरूमा विद्युत आपूर्ति गर्दछ, या त समर्पित चार्जिंग युनिटहरू वा घर भित्रबाट। ब्याट्री पावर प्राप्त गर्दछ, यो प्रयोग को लागी जब ब्याट्री मा भण्डारण गर्न को लागी कार चलाउछ। हाइब्रीड गाडीहरू पार्ट ब्याट्री पावर प्रयोग गर्नुहोस् र सवारी चलाउन सहयोगको लागि ईन्धन लागू गर्नुहोस्।
सम्पूर्ण इलेक्ट्रिक कारहरूले कुनै उत्सर्जन उत्पादन गर्दैन जुन तिनीहरूलाई अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाउँछ, वायु प्रदूषण कम गर्दछ। तिनीहरू पनि कम आवाज प्रदूषण उत्पादन गर्दछ किनकि तिनीहरू पेट्रोल वा डिजाइन इन्जिनहरू भन्दा शान्त छन् जुन ध्वनि प्रदूषणको लागि उत्कृष्ट छ।
तिनीहरू कति छन् र एक चलिरहेको लागत के हो?
प्रारम्भमा, एक इलेक्ट्रिक कारको लागत औसत कार भन्दा धेरै बढी हुन्छ। ब्रान्ड फारम £ १,15,000,००० र गाडीको विशिष्टताको आधारमा उच्चमा निर्भर भई लागत दायरा हुन सक्छ। सामान्यतया, उच्च-अन्त मोडेलहरू धेरै अधिकको लागि जान्छन्, लगभग ,100,000 १००,००० +। यद्यपि थप व्यक्तिलाई छिटो सed्क्रमित हुनका लागि बेलायत सरकारले ए प्लग-इन कार अनुदान त्यो कारको प्रारम्भिक लागत £ 3,500 ले कम गर्दछ। अन्य अनुदानहरूले पनि ग्राहकलाई घर चार्जर स्थापना गर्न £ 500 प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
इन्धनको कार चलाउनु भनेको इन्धनको कार चलाउनु भन्दा सस्तो काम गर्दछ किनकि तिनीहरूलाई परिवर्तन गर्नु डिजेल वा पेट्रोलको साथमा गाडी भर्नु भन्दा कम खर्चिलो हुन्छ। सेवा इलेक्ट्रिक सवारीहरू पनि सस्तोमा सोच्दछन् उनीहरूको जस्तो कम चल्ने भागहरू र कम मुद्दा सामान्यतया। तिनीहरू पनि बेलायतमा सडक करको लागि उत्तरदायी हुँदैनन् यदि गाडीको £ 40,000 भन्दा कम खर्च भयो भने। यद्यपि यो उत्कृष्ट लाग्दछ, विद्युतीय कार चलाउने मूल्य थोरै बढी छ, जुन बीमाको लागत हो किनकि विद्युतीय सवारी बीमा गर्ने धेरै बीमा कम्पनीहरू छैनन्, जो महँगो देखिन्छन्।
तिनीहरू चार्ज गर्न कति समय लाग्छ, र तिनीहरू कहाँ चार्ज गर्न सकिन्छ?
धेरै जसो, तर सबै होइन, त्यहाँ तीन चार्जिंग गतिहरू छन्: ढिलो, छिटो र छिटो। यद्यपि स्वयं-स्पष्टीकरणात्मक, सब भन्दा ढिलो परिवर्तन गति लगभग -8-१० घण्टा लिन्छ र कारलाई रातभर चार्ज गर्नका लागि गरिन्छ, जब यो प्रयोग भइरहेको छैन। दोस्रो गति छिटो चार्जिंगमा 10--3 घण्टा लाग्छ र काममा वा इन-ईरान्डको बीचमा गर्न सकिन्छ। अन्तिम चार्जिंग गति, द्रुत, लगभग -०-6० मिनेट लिन्छ, समान तपाईंको स्मार्टफोनको रूपमा, कारलाई शक्ति बढावा दिँदै।
बेलायत भरि त्यहाँ छन् ,30,000०,००० चार्जिंग पोइन्टहरू हाल ११,००० स्थानहरूमा। २०१० मा २००० सम्ममा १०,००० चार्जिंग पोइन्ट थप गर्ने प्रत्याशासँग जोडिएको थियो। संक्रमण सम्भव हुनका लागि बेलायतले १.2019 अर्ब डलर खर्च गर्नु पर्नेछ जुन चार्जिंग स्थानहरूको संख्या २ 10,000,००० ले बढाउनेछ। यसले अनुमानित million लाख विद्युतीय सवारीहरू समाहित गर्दछ जुन सम्भावित रूपमा सडकमा हुनेछ
इलेक्ट्रिक कारको स्वामित्वको कमजोरी के हो?
यद्यपि नयाँ टेक्नोलोजीहरू हामीलाई जीवनका नयाँ तरिकाहरू प्रदान गरेर चाखलाग्दो र रमाईलो हुन सक्दछ, ती लागतमा आउन सक्छन्। ब्याट्रीमा प्रयोग गरिएको टेक्नोलोजीले सबैभन्दा समस्याग्रस्त सीमितताहरू प्रदान गर्दछ। ठेठ इलेक्ट्रिक कार ब्याट्री कोबाल्ट को मूल्य 9kgs मा निर्भर गर्दछ।
कोबाल्ट एक रासायनिक तत्व हो जुन खननबाट फेला पार्न सकिन्छ र लिथियम-आयन ब्याट्रीमा प्रयोग हुन्छ। केहि हीरा जस्तै, यसको खनन शंकास्पद छ र केहि केसहरूमा बाल श्रम प्रयोग गरीरहेको छ, गरीब काम गर्ने अवस्थाको साथ अपर्याप्त रकम तिर्न।
यद्यपि यो सबै इलेक्ट्रिक कारहरूको लागि मामला होईन, यो तपाइँको अनुसन्धान गर्दै र तपाइँले किन्नु भएको ब्रान्डले यसलाई रोक्न मद्दत गर्दछ जहाँ र कहाँ र कसरी तिनीहरूको सामग्री खटाईन्छ भनेर हेर्न लायक छ।
कार सांप्रदायिक समाचार विद्युतीय सवारी स्थिरता स्थायी ऊर्जा
कठिन समय मा डिप्रेसन र आत्महत्या
व्यवसायमा VR को अनुप्रयोगहरू - Ideation देखि कार्यान्वयन सम्म